Sunday, Jenụwarị 22, 2017 Douglas Karr
Tupu iwe iwe m na edemede a, biko gụọ ya nke ọma. Anaghị m ekwu na Google abụghị ezigbo nnweta nnweta ma ọ bụ na enweghị azụmaahịa azụmaahịa na atụmatụ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ usoro nyocha. Isi okwu m n’isiokwu a bụ na nnukwu azụmaahịa na --achị nsonaazụ ọchụchọ organic na akwụ ụgwọ. Anyị amatala na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa bụ ọwa ebe ego na-achị, ọ bụ ụdị azụmaahịa. Mmemme ga-aga mgbe niile